Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan Qaabka Windows digsi
Ma maqlay oo ku saabsan formatting disk in Windows 7 / XP / Vista, laakiin aadan aqoon sida loo sameeyo? Ha welwelin. Maqaalkani waxa uu si fudud idin Toosiya hawsha oo dhan. Maqaalkani waxa uu daboolaa qaybo badan, guji si aad wax dheeraad ah oo ku saabsan faahfaahinta bartaan:
Qaybta 1. Waa maxay formatting?
Qaybta 2. Laba Noocyada Qaabka
Qaybta 3. Sida loo qaab drive adag
Waa maxay formatting?
Formatting waa geedi socod lagu tirtiro iyo diyaarinta drive adag isticmaalka hore. Waxaa jira sababo badan oo laga yaabaa in aad rabto in aad qaab drive adag - rakibo nadiif ah Windows, virus ama ka saarida furin, ama si fudud u nadiifi ka hor inta iibinteeda ama la siiyo qof kale. Formatting waxaa guud ahaan loo kala qaybiyey saddex qayb-hoosaadka,
Heerka formatting Low
Formatting Heer Sare Ah
Heerka formatting Low ka dhigan dusha ka mid ah cajaladaha la calaamadood oo muujinaysa bilowgii block duubo iyo in la dambe loo isticmaalo qofka xukuma disk in uu akhriyo ama loo qoro xogta. Tan waxaa loogu tala galay in la aasaasin joogtada ah ee disk ah, oo waxaa inta badan dhameystiray Warshadda.
Partitioning qaybiyaa disk ah galay mid ka mid ah ama ka badan qaybaha, qoraal dhismayaasha xogta si disk ah si ay u muujiyaan bilowgii iyo dhammaadka gobollada.
Formatting Heer Sare Ah abuuraa qaab nidaamka file gudahood xijaab disk ama mugga macquul ah. Formatting Tan waxaa ku jira qaab-dhismeedka xogta ay isticmaashay OS si aad u ogaatid drive ay macquul ah ama waxyaabaha xijaab ee. Tani waxaa laga yaabaa in ay dhacaan inta lagu jiro nidaamka ka hawlgala rakibo, ama marka ku daray disk cusub.
Waxa jira laba nooc oo ah qaab:
* Qaabka Quick iyo Qaabka Full.
Waxaan la weydiiyay marar badan sababta ay u isticmaalaan Qaabka Full taas oo waqti badan Qaabka Quick halkaas oo geeddi-socodka ahaataa dhowr ilbiriqsi. Waa hagaag, farqiga u yahay in Qaabka Quick ma dhab ahaantii tirtirto xogta ka Hard Drive. Hase yeeshee, waxa kaliya u muuqda in uu madhan oo ka dhigeysa in xogta aad ku kaydsan meel ka taas oo laga soo celiyey ka dib oo dhan. Ha ii fahmin khalad ah, Qaabka Quick waa qalab aad u wanaagsan in qaab HDD ah marka aad u diyaarinaya adeegsiga ugu horreeya (brand cusub HDD) ama haddii aad dooneyso in ay dib ugu aad OS. Dhinaca kale Qaabka Full tirtirtaa wax kasta (oo aan posibility ay u soo celiyaan) iyo wixii intaa uu baaritaanku Risaalo u Waaxaha xun taas oo dhab ahaan sababta raagto in ka badan Qaabka Quick.
Xasuuso hal shay: Waxaad aan qaab karaa drive ah in uu yahay in la isticmaalo halka aad Operating System.This waa feature ammaanka ah oo sidaas daraaddeed ma waxaad tirtiri kartaa Windows shil.
Sharaxaada: Xaaladaha intooda badan, aad Windows lagu rakibi doonaa on C a: Risaalo aad HDD sidaa darteed marka aad qortey shubo Windows, aadan qaab karaa C: xijaab, sababtoo ah waxaa la loo isticmaalo la joogo in.
Qoruhu kale sida D: la formatted karo iyada oo aan wax dhibaato ah oo ay si fudud u dooranayo, xaq guji aad mouse ku yaal iyo QAABKA xusho. Yar suuqa kala A furmay iyo ina siinaysaa kala duwan oo ka mid ah fursadaha oo aan ka dib ka wada hadli doonaan.
Sida loo qaab drive adag
Qaybtaan waxaan doonayaa in aan uga wada hadlaan sidii ay u qaab xijaab halka qortey shubo Windows iyo sida loo sameeyo marka booting ka CD ah Live ama USB.
Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan doonayaa in aan u sharaxno wax dhawr jeer aan soo sheegnay ka hor.
Waa hagaag, waa maxay qoruhu?
Drive A adag loo qaybin karaa qaybaha yar, loo yaqaan qoruhu.
Ka dib qaab, xijaab kasta waxaa loo xilsaaray in ay warqad u gaar ah (C:, D :)
Sidaas marka aad go'aansato in aad qaab xijaab gaar ah, hubi in ay tahay arrin ay suurtagal tahay in ay qaab aan dhibaato ilaa xogta aad ku qoruhu kale, ama si kale loo dhigo, qoruhu kale hadhay Sucuudiga.
Dhinaca kale, haddii aad go'aansato in qaab HDD oo dhan, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto Risaalo. Sidaas, marka aad tirtirto qoruhu, ay sameeyaan meel unallocated oo aad go'aansato in aad samaysid qoruhu oo leh cabir, nidaamka file, iwm
Hadda oo aan daboolay qaybta qoruhu, ee ay isugu formatting.
Sidaas hore aynu u sheegnay in ay jiraan labo siyaabood oo qaab:
marka aan qortey shubo Windows
marka aan kabaha ka CD Live ama USB
Waxaan sidoo kale ku xusan sida loo qaab drive gaar ah (drive ah in aanan la isticmaaleyn by Windows) by waxaa xulashada, xaq guji iyo xulashada QAABKA khiyaar ah.
Tani waa halka aan ka heli daaqad cusub oo fursado gaar ah in aan u baahanahay in la hor dhigay dacwad.
Capacity inoo muujinaysa baaxadda Risaalo
Nidaamka File waa qaab computer ah u isticmaalaan in ay abaabulaan xog ku saabsan disk adag (qeybtan waxaa loo wada sharaxi doonaa ka dib)
Size Unit Qoondeynta waa tirada ugu yar ee meel disk loo isticmaalaa in lagu qaban file ah.
Volume calaamadda waa meel aan magacaabi naga xijaab.
Qaabka Quick waxaa lagu hubiyaa iyadoo default (uncheck ee ku aadan ikhtiyaarka Full Qaabka in la isticmaalo)
Create an MS-DOS xawaaladaha disk - waxaad dareemi doonto xulashadan waxaa grayed baxay iyo sababta ay tahay in aanan u baahan tahay si ay u abuuraan MS-DOS xawaaladaha disk tan iyo markii aan leeyihiin drives USB ka taas oo aan maalmahan kabaha karo iyo u isticmaalaan sida kabashada qalabka nidaamyada kharribeen.
Ka hor inta sii socday, waxaan halkan joojin doonaa oo u sharax waxa ay dhab ahaan waa hab file ah iyo waxa ay u shaqeeyaan.
Waxaa jira dhawr nidaam file aan ka hor Socota la formatting dooran kartaa.
File Systems qaybsan yihiin:
Baruurta ama FAT16 (Shaxda Qoondeynta File)
VFAT (nidaam file baruurta wanaagsanaaday)
FAT32 (kordhin ah baruurta iyo VFAT)
HPFS (File System Performance High)
Baruurta File System waxaa loo isticmaalaa by DOS oo waxaa taageera oo dhan Systems kale Operating. Waa wax iska fudud, lagu kalsoonaan karo oo aanu ku baabbi'iyee kaydinta badan. Tani waa habka file a soo bandhigay sanadkii 1977 si loo isticmaali on saxannada kumbiyuutarka. Charcteristic ugu weyn ee nidaamka file tani waa shir magacaabista ay la odhan jiray 8.3 taasoo la micno ah in uu 8 characters hor dhibic iyo 3 ka dib.
VFAT waa isticmaalka kale ee baruurta in la adeegsado magacyadoodu dheer tahay baruurta 8.3 heshiiska ay qaateen DOS. 255 qof magacyada dheer ayaa halkan soo bandhigay sida soo horjeeda in baruurta asalka. Waa la heli karaa in Windows 95 iyo Windows NT 3.5.
HPFS in la qorsheeyay in la wanaajiyo la dhaafi karin nidaamka file baruurta. Waxay bixisaa qaab ka fiican tahay baruurta ku muda weyn iyo taageerada magacyada dheer file. Waxa ay taageerayaan Windows NT.
NTFS waa nidaam file da'da cusub ah. Waxa ay taageertaa wax walba oo hore taageero nidaamka file. Intaa waxaa dheer, waxa ay ina siinaysaa magacyada dheer file, tiro badan, si fiican ammaanka xogta (sirta), riixo faylasha, kootada digsi (Xadka dhigay maamulaha in xadidaya dhinacyo cetain isticmaalka nidaamka file) oo file sharing Universal.
* Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 naga siin doonaa fursadaha saddex keli ah:
Baruurta, FAT32 iyo NTFS, sidaa daraadeed waxa muhiim ah in la ogaado farqiga u dhexeeya iyaga ka hor doorashada mid ka mid sax ah.
Inta badan caadi ah oo maanta loo isticmaalaa nidaam file waa NTFS, maxaa yeelay, waxay inna siisaa wax kasta oo aan u baahan tahay.
Waxa si fudud nidaamka file ugu fiican waa maanta oo waxaa wax loo baahan yahay in la doorto wax kale haddii aad leedahay makiinadda weyn la Windows NT iyo hoos (isticmaalka baruur kaliya ee mashiinada halkaas oo muda waa 2GB ama ka yar).
Size Qoondeynta waa in la hartay default haddii ay jirto baahi gaar ah sababta waa in loo badalaa.
Hubi in xogta oo dhan waa la xoojiyaa hor formatting (gaar ahaan marka ay qabanayaan Qaabka Full) oo kale waxaa laga yaabaa in aysan si ay u soo celin mar habka la dhameeyo.
Si kale oo loo formatting qoruhu drive isticmaalayo Console Management digsi.
Xaq-guji Computer icon on Desktop iyo xulashada Maamul waxaa naga qaadato. On liiska dhanka bidix, waxaa jira doorashadda Management digsi.
Dhammaan qoruhu nagu waxaa ku qoran iyo xaq u riixaya mid ka mid ah na siinaysaa kala duwan oo ka mid ah fursadaha ay ku jiraan qaab. Xaq-gujinaya aad xijaab Windows ku tusi doonaa qaab doorasho grayed baxay taasoo la micno ah in la ilaaliyo oo aan la formated karaa sababo ammaanka sida ku qoran ka hor.
Sida laga soo image arag kor ku xusan, waxaa jira arrin xoogaa fursado ah marka aan xaq-guji Risaalo la doonayo.
Haddii aan boos unallocated, waxaan isticmaali kartaa Wizard ah Volume Simple New halkaas oo aanu arki kartaa dhammaan tallaabooyinka aynu ka wada hadalnay oo ka mid ah oo dheeraad ah loo yaqaan sahlo File iyo riixo Folder taas oo, sida aan sheegay, daray la NTFS.
Ugu dambeyntii, waxaa jira hal jid inay qaab xijaab markii qortey shubo Windows iyo in uu isticmaalayo a degdeg ah amarka u tacsiyeeyaan.
Simulaneously button daaqadaha riixaya oo ay la socoto warqad R furey Orod Console halkaas oo aanu ku qor Lauch oo guji galaan.
A suuqa kala madow fiican furmay diyaar u ah inay ka dhergi amarrada.
Amarka loo isticmaalo in qaab xijaab waa:
Tusaale ahaan waxaa ka mid ah noqon doono
By isticmaalaya amarkan aan u doortay inaan ka hadlo xijaab qaab D: isticmaalayo nidaamka file NTFS ah - oo aan la tilmaamayo habka faylka, NTFS waa default ka mid ah in la isticmaalo.
Haddii aan rabno, waxaan dooran kartaa nidaamka file iyo amarka waa sida soo socota:
format (space) / FS: ntfs ama / FS: fat32 ama / FS: baruurta (for fat16) oo ku daray warqad drive ee dhamaadka ah.
Tusaale tani waxay noqon lahayd
Nooca ugu danbeysay ee formatting file waxaan doonayaa in aan halkan ku xuso yahay, sida aan jeclahay in aan ku odhan, formatting baxay sanduuqa. Wixii noocan ah, waxaan u baahan nahay CD ah Live ama USB drive ah Downlaods la Windows ku yaal.
Mabda'a formatting maanta loo jecel yahay isla dhan versions Windows, ka XP in 8.1, kala duwan waxa laga heli karaa oo keliya ee looks ee Console ah.
Si nidaamka bilowdo, waxaan u baahanahay in aannu mashiinka si aad ka CD ama USB. Taas waxaa la samayn karaa adiga oo riixaya badhanka DEL ama F2 (ku xiran tahay oo ka mid ah verions ee BIOS). Under Options Advanced aan ka heli kartaa fursad ay beddelaan si boot oo mar qarka u saaran inuu CD / DVD drive indhaha ama USB oo badbaadiyey, waxaan u baahanahay inaan ka bilaabo.
Waakanaa waxaad ka arki kartaa sawirada screens xawaaladaha ee nooc oo kala duwan Windows ka dib markii laga saaray LiveCD ama USB
In Windows XP image waxaan ka arki karnaa waxaa la siiyaa aan xoogaa fursado ah uu ka soo xusho. Waxaan dooran kartaa nidaamka file iyo nooca formatting, taas oo ku xidhan waxa aan u baahanahay
In image kor ku xusan waxaan ka arki karnaa in ka dib dooranaya parition la doonayo, waxaan u baahanahay in guji Drive Options oo waa fursad Advanced meeshaas oo aannu u dooran karaan waxa la sameeyo iyadoo xijaab laftiisa. Windows 7 iyo 8 lahayn farqiga qaybtan si hoos image noo muujinaysaa dhab ahaan waxa fursadaha ay noqonayaan laga heli karaa haddii aan guji Drive Options (sare) feature.
Waxaan abuuri karaan xijaab cusub, waxaan qaab karo kan hadda jira, waxaan u tirtiri kartaa mid jira ama xataa kordhiyo qoruhu. Nidaamka file default ee dhan verions ee Windows ka Server 2003 iyo ilaa waa NTFS, oo sidaas waa on Windows XP laakiin FAT32 waa wax caadi ah waxaa sidoo kale.
Saamaynta ay wax nooca qaab doortay waa isku mid, kala duwan way kala duwan yihiin nooca qaab laftiisa (Quick ama Full). Waa maxay weli waa u user a si ay u doortaan waxa waa habka ugu haboon isaga, waayo / iyada in ay tagaan iyo fahmo sababta ay yihiin qaar ka mid ah fursadaha loo isticmaalo in ka badan dadka kale iyo wixii kiis.
Xasuusnow, mar walba laba jibaarno hubinta drive ka hor formatting iyo hubi in aad dib ilaa xogta oo dhan.
Hel iPad ka mid ah Recovery Mode
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka iPad
Sida loo celi iPhone la Lugood / iCloud
CleanMyMac - aad ka ogaato
Coobbi Memory Nadaafadda ayaa Mac
iPhone Hard Warbixannada vs. Warbixannada jilicsan
Sida loo celi Network Settings on iPhone
Wax walba oo ku saabsan Qaabka digsi iyo digsi Qaabka
6 xal u windows media baadi ciyaaryahan c00d1199
> Resource > Windows > Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan daaqadaha qaab disk